Budata Sushi Roll 3D APK maka Android
Budata Sushi Roll 3D
Ikpo okwu: Android Asụsụ: English
Free Budata maka Android (74.00 MB)
Budata Sushi Roll 3D,
Sushi Roll 3D bụ egwuregwu ịme egwuregwu gam akporo ebe ị na-elekọta ụlọ oriri na ọ servingụ servingụ na-enye nri nri ndị Japan. Iberi, gbue ma tụgharịa mepụta sushi kachasị mma na egwuregwu nri a obi. Ka ị na-atụgharị sushi, ị ga-enwekwu obi ụtọ karịa ndị ahịa gị na ego ụlọ oriri na ọ restaurantụ yourụ gị ga-enweta! Inye sushi dị ụtọ, egwuregwu na-atọ ụtọ ma na-eju afọ, ikuku dị jụụ ASMR na ohere iji gbaa ụlọ nri gị, Sushi Roll 3D nwere ike ibudata nefu na Google Play na ekwentị gam akporo.
Mụọ ụdị mma gị na ụdị nri nri Japan ọ bụla. Isi nri anaghị akwụsị ebe ahụ! Gbalịa ihe ọhụrụ site na igwu obere egwuregwu ndị na-adọrọ mmasị. Na-eme ndị ahịa afọ ojuju ma ọ bụ nyochaa mmeghachi omume ha site na ngwa ngwa ịkwadebe nri dị mma na ọtụtụ ihe (ha nwere ike ịda mba ma ọ bụ iwe iwe na nri adịghị mma). Mgbe ị na-eme sushi, jide naka na ị ga-enweta ihe ndị kwesịrị ekwesị ma zere ihe ndị ga-egbochi gị ijere nri dị ụtọ. Kpachara anya; onweghi onye obia choro oke ahihia na obere azu, ma obu karie, ihe ga-aputa na sushi!
Will ga-ewepụ nchegbu gị nke ndụ nezie ka ị na-agafe ọkwa dị egwu na egwuregwu ahụ. Oriri na anya gi na nti gi na nsogbu nsogbu ASMR ka ị na-azu ka ibu nna-sushi. Egwuregwu a na-atọ ụtọ na eserese na-adọrọ adọrọ ga-eme ka ị rọrọ sushi.
Kpoo ihe na-esiwanye ike inweta ego buru ibu ma mepee sushi na ihe ndozi ohuru.
Mee ka nkà sushi gị nwee ike ị nweta ụgwọ ọrụ igbe dị ịtụnanya nke gụnyere ngwa ọhụrụ, ịcha ngwa ọrụ na omume.
Bugharịa ma gbue sushi, tuo ma gbue azu, chiiz cheese, mee osikapa, tuo noodles na igbe mbata, na ndi ozo di iche-iche.
Na-arụ ọrụ na ihe ndị e ji eme ihe dịka azụ, osikapa, ahịhịa mmiri, ma nweta ihe ndị pụrụ iche dịka chilli, durian na caviar ka ị na-aga nihu.
Gbanwee ụlọ oriri na ọ furnitureụ withụ gị site na arịa ụlọ ọhụrụ, nri abalị, ihe ịchọ mma na ngwa iji mee ka ego gị na-abawanye.
Nwaleenụ nkà gị na wacky na-atụghị anya ya Efrata na fun daashi etoju.
Zuo ike ma nwee obi uto na egwuregwu ASMR a site na ụda mgbochi nchegbu, visuals na ọgwụgwọ na-atọ ụtọ.
Ojiji onye ọrụ-na mfe na-amụta interface na-eme ka ọ dị mfe na-awụlikwa elu na mpịakọta.
Sushi Roll 3D Ụdịdị
Ikpo okwu: Android
Nha faịlụ: 74.00 MB
Flight Sim 2018 bụ otu nime egwuregwu simulator kacha mma nelu ikpo okwu mkpanaka nwere njiri mara...
Ọ ga -amasị gị isonye na asọmpi gwongworo nelu ikpo okwu mkpanaka? Egwuregwu Truck 2018, nke dị...
Euro Bus Simulator 2018 bụ egwuregwu ekwentị na -akwụghị ụgwọ nke na -enye ndị egwuregwu ahụ ịme...
Negwuregwu a, ị ga -agba akaebe ekweghị ekwe nke na -eme mgbe ị na -arụ ọrụ ugbo. Weghara ugbo gị...
Site na Mberede Ọkwọ ụgbọ ala 2018, anyị ga -eme mgbanyụ ọkụ nelu ikpo okwu mkpanaka. Site na...
Ndị ọrụ! Bụ egwuregwu ịme anwansị nke ị nwere ike igwu na ekwentị mkpanaaka gị na sistemụ arụmọrụ...